African Sports Tourism Vhiki Ghana 2019 inoungana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sports » African Sports Tourism Vhiki Ghana 2019 inoungana
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Ghana Kupwanya Nhau • nhau • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Tourism ndiko kuyambuka kwemiganhu kune chiitiko. Mitambo Tourism ndechimwe chiitiko chakadai kuunza vakawanda kuyambuka miganhu sezvo vachiverengerwa nhasi seMitambo Yevashanyi Vamiririri.
Iyo 2019 edition yeAfrican Sports Tourism - mutungamiri, Pan-Africa kusangana kwevatori vechikamu kubva kune ese ari maviri emitambo uye enzvimbo dzekushanya, inofamba gore rega kubva kune imwe nyika yeAfrica ichienda kune imwe ichaitirwa Ghana gore rino uye zviitiko zvikuru zviviri zvakarongerwa kuti zvive musoro wevhiki.
Iwo maAfrican Sports Tourism Summit & Olimpiki Roundtable uye African Sports Kuenda Makomborero. Musangano uyu uchaona kuungana kwemasangano emitambo / makomisheni / makanzuru, makomiti eOlimpiki, makomiti ekuronga emuno, mabhodhi ezvekushanya, vanoita zvekushanya nevamwe vanobatanidzwa kubva kune ese ari maviri emitambo uye ezvekushanya. Vachave vachiyambuka-mazano uye vachichinjana ruoko rwekuyanana, vakananga Africa iyo mitambo inoonekwa uye inosvikirwa sekushanya. Ichabata ku Oak Plaza Mahotera muAccra Ghana, musi wa19 - 20 Nyamavhuvhu, 2019.
Pane runyorwa rwevatauri ndiJuliet Bauwah, Dev Govindjee, Geoff Wilson, Tafadzwa Mapanzure, Abi Ijasanmi naSeyi Akinwunmi.
Juliet Bawuah izita remukadzi rechikadzi mumitambo muAfrica yose. Iye anogara panhanho inosarudza CAF African Nhabvu yeGore. Muvambi weAfrican Women Sports Summit ishamwari yeRadio Netherlands Training Center. Iye parizvino mutambi wenhabvu wemu Africa paTRT, kambani inotungamira yeEuropean terevhizheni muTurkey.
Seyi Akinwunmi gweta rakakwana iro munguva yakapfuura rakamisa hunyanzvi nevatambi veindasitiri yekushanya. Anoshanda sa1 Mutevedzeri Wemutungamiriri weNigeria Nhabvu Federation uye sachigaro weLagos FA.
Dev Govindjee inyanzvi yemutambo wekiriketi wekuSouth Africa uyo akatamba mumitambo makumi mana nemashanu yekirasi yekutanga kuEastern Province pakati pa45 na1971. Akashanda neInternational Cricket Council kweanopfuura makore gumi. Parizvino mutambi wepasi rese wemutambo.
Nhengo yebhodhi ku Tourism Northern Ireland - Geoff Wilson anomhanyisa bhizinesi rake rekushambadzira nekutaurirana, achitarisa zvakanyanya pamitambo. Pakutanga Musoro weKushambadzira uye Kutaurirana (Irish FA), aive nebasa rehukama neruzhinji, zvirongwa zvebhizimusi, kusimudzira mhando uye kutaurirana kune vateveri.
Geoff anoshanda nezvinodiwa zveFIFA, UEFA, AFC, FIBA ​​nemamwe masangano emitambo epasirese munzvimbo dzakasiyana siyana kubva pakuronga zvine hungwaru, kushambadza nekutaurirana, digitaalinen, vateveri kuita, zviitiko zveveruzhinji uye kugovana ruzivo / zvirongwa zvekuchinjana. Uye zvakare, Geoff anobvunzana nemakambani akati wandei emitambo muCRM, eSports, inopfeka uye nevefeni nzvimbo yekubatira. Geoff ari mudzidzisi wenguva pfupi mukushambadzira paQueen's University Belfast uye ari Sachigaro weNetball Northern Ireland.
Tafadzwa Mapanzure chipangamazano muindasitiri yemitambo ane makore ekuziva mukushambadzira kwemitambo mudunhu reSouthern Africa.
Abi Ijasanmi aive mumwe wevamiririri vechikadzi kutanga kutaurirana mihoro, zvibvumirano uye midhiya madhiri evatambi veUS Basketball muEurope, Asia neMiddle East. Gweta Rezvekutengeserana ane makore anopfuura gumi ruzivo rwekuvandudza bhizinesi, akabatana neTrans-Atlantic Sports kushambadzira semunhu aidzidzira basa muna 10 uye muna 1998 akava nebasa rekumiririra tarenda mumisika dzakasiyana seLebanon, Italy, Lithuania neFrance. Kuongorora mutambi, timu uye hukama hwevezvenhau, uye kuyedza kwake kwakaita kuti vatambi vakwanise kupinda munzvimbo dzisingazivikanwe uye kuraira fizi yehunyanzvi.
Abi akatungamira chikamu chevakadzi cheTASM, yekutanga yerudzi rwayo muEurope. Nekwaniso yekuona mikana mitsva uye kushuvira kugona kweAfrican Basketball, Abi akazvimisikidza semurevereri wevatengesi vepasirese anotarisa kubasketball kukondinendi yeAfrica. Muna 2006, hunyanzvi hwaAbhi hwakadaidzwa neOlimpiki Goridhe Medalist, Tessa Sanderson kuti ape hunyanzvi hwezvemutemo nekutengesa kune achangogadzira mitambo yemitambo yemitambo yeLondon 2012. Iye zvino ari Director we Africa kuDiamondAir International.
Vachitaura nezvechiitiko ichi, Deji Ajomale-McWord, Mutungamiri weAfrican Sports Tourism Vhiki, akati "chinangwa chedu ndechekuwedzera zvigadzirwa zvemumba zvemarudzi eAfrica, kuburikidza nemitambo yemitambo yakasununguka uye zororo remitambo. Nhabvu dzinogona kungogoneswa zvirinani kuburikidza nezvinoitika zvinongogadzirirwa kugamuchira vaeni nekushanya.
Tichave tichienda kune dzakasiyana nyika dze Africa, gore rimwe nerimwe kunze, kuitisa muchato wemitambo uye wekushanya, uye tichitarisa kudanana kwavo kuve nechokwadi kuti chinoburitsa vana vehupfumi hwemagariro. Dingindira redu regore rino nderekuti 'Kubatanidza Zvekushanya Kwemitambo neZvisungo Zvekusimudzira' uye tichange tichikurukura mimwe misoro iri kunetsa pakubhidha, nei Africa isiri kukwezva zviitiko zvemitambo zvakakwana uye kugadzirisa zororo remitambo muAfrica ”.
Paakabvunzwa nezve mibairo, Deji anodzokorodza kuti "kunyangwe ichiita kutanga kwayo mu2019, African Sports Destination Awards yaunganidza kufarira mukondinendi yose. Tourism mabhodhi uye mabhureki mumitambo yemitambo kukoshesa cheni dzakabatanidzwa zvine mutsindo mukugadzwa nekuvhota.
Iyo yekuvhota portal ikozvino yakavharwa uye vanokunda vanotsanangurwa nemavhoti kubva kuruzhinji nejuri. Tichave tichipinzawo rimwe zita mu'Shamwari dzeMitambo Yekushanya 'horo yemukurumbira, kirasi yakasarudzika yemhando, masisitimu uye vanhu vamwe vanotsigira chinangwa chekukurudzira uye kukurudzira vanhu kuti vasiye dzimba dzavo uye vaende kune dzimwe nzvimbo pasi redu, zvemitambo zvinangwa.
"Chinangwa chedu ndechekumisikidza vatambi vari mumaindasitiri ezvekushanyirwa, uye nekubatanidza Africa kuburikidza nemitambo pamwe nekushanya."